टिप्स – rastriyakhabar.com
यौन सम्बन्धका क्रममा हुने चरम सुखको प्राप्तिलाई नै अर्गेज्म भन्ने गरिन्छ । जसको अनुभव यौन गतिविधिको दौरान हुने गर्छ । यसलाई कामोन्माद र चरमोत्कर्षको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ । यसको अनुभव पुरुष र महिला दुवैलाई हुने गर्छ । यस लेखमा पुरुष अर्गेज्म र महिला अर्गेज्म दुवैको बारेमा बताउन लागिएको छ । साथमा..
बिहिबार, अशोज १, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । शरीरमा क्याल्सियमको अभावका कारण हड्डीहरू कमजोर हुन थाल्छ । वृद्ध उमेरका मानिसहरूमा यो समस्या अधिक देखिन्छ । केही व्यक्तिले डेरी उत्पादनको मद्दतले शरीरमा क्याल्सियमको अभाव हटाउने सल्लाह दिन्छन् । तर, दुग्ध उत्पादनको अत्यधिक सेवनले शरीरको बोसोको मात्रा बढाउँछ, जुन मोटोपनाको प्रमुख कारण..
गर्भमा छोरा छ कि छोरी यी संकेतबाट थाहा पाईन्छ ?
एजेन्सी । छोरा या छोरी दुवै समान हुन् । हाम्रो समाजमा छोरा र छोरीमा गरिने भेदभाव तथा गर्भपतनका कारण गर्भवती महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको लिङ्ग परिक्षण गरिनु गैरकानुनी मानिन्छ । तर, यदि भेदभावको दृष्टिकोणले नभई उत्सुकता मेटाउनको लागि छोरा र छोरी के छ भन्ने जानकारी लिन चाहेमा आफैले घरमा पनि अनुमान गर्न..
यौन हरेक सजिब प्राणिहरु यौन क्रियाकलाप संग जोडिएकै हुन्छन । चाहे वंश अगाडि बढाउने सम्बन्धमा होस, चाहे आनन्दका लागी होस यौन अपरिहार्य विषय हो । थुप्रै अनुसंधानहरु यौनसंग सम्बन्धित हुने गरेका छन । अनुसंधानबाट यौन लाई मानिसको स्वास्थ्यसंग समेत जोडिन थालेको छ । यौन क्रियाकलापमा सक्रिय व्यक्ति र..
कस्तो छालामा कुन प्रकारको स्क्रबिङ गर्ने, जान्नुहोस !
अहिले बढ्दो प्रदुषणका कारण विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुन थालेका छन् । जसमा धुलो-धुवाँका कारण छालामा नराम्रो प्रभाव पर्न थालेको छ । धुलो-धुवाँका कारण छालामा फोहोर जम्छ, अनुहारको छालामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । जसका कारण अनुहारको आकर्षण हराउँछ । अनुहार सुन्दर र आकर्षक देखिनका लागि समय-समयमा अनुहार..
अनुहारमा नलगाउनुस् यी चिज, जसले बनाउँनेछ अनुहारलाई कुरुप
सुन्दर बन्ने चाहना हरेकको व्यक्तिको हुन्छ । जसले पनि अनुहारलाई सुन्दर बनाउन सके सम्म हर कुराको प्रयोग गर्ने गर्छन् । मानव शरिरको सबैभन्दा संवेदनशिन क्षेत्र भनेको नै अनुहार हो यहि अनुहार नै कुरुप भयो भने विभिन्न समस्याहरु आउन सक्छन् । चाया पोतो डन्डीफोर जस्ता समस्याले सुन्दर अनुहारलाई कुरुप बनाएर..
सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । यति नै बेला सेक्स गर्नुपर्छ भन्ने किटानी त छैन । तर पनि उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुने र..
एजेन्सी : प्रेमी प्रेमिका वा पति पत्नीबीचको सम्बन्धलाई राम्रो र सुमधुर बनाउने एउटा माध्य सहवास वा यौन क्रियाकलाप हो । पार्टनर आफूहरुबीचको यौन कर्म लामोसमय होस् भन्ने चाहने विभिन्न अध्यननहरुले समेत देखाएको छ । यौन क्रियाको आनन्दको लम्बाई तपाईं आफू र पार्टनरमा भर पर्ने कुरा हो । हुन त यस्तो लामो समय..
शीघ्र स्खलन कसरी कम गर्ने ? यस्ता छन् ७ तरिका
एजेन्सी : के तपाईं शीघ्र स्खलनका कारण मानसिक तनावमा त हुनुहुन्न ? यदि हुनुहुन्छ भने अब यस्तो उपाय अपनाउनुस् र रोक्नुस् शीघ्र स्खलन । यौनसम्बन्धी समस्याहरूमध्ये सबैभन्दा बढी हुने समस्या शीघ्र स्खलन हो । शीघ्र स्खलन हुनुको कारण प्रायः जसो शारीरिकभन्दा पनि बढी मानसिक समस्या रहेको पाइन्छ। शीघ्र..
एजेन्सी । गर्भवती महिलाहरु पेटमा बच्चा बसेको समयमा निकै सावधानी अपनाउछन् । त्यस्तो अवस्थामा सामान्य चोट लाग्दा पनि बच्चा खेर जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण महिलाहरु विषेश सावधानी अपनाउन चाहन्छन् । त्यहि कारण हुनसक्छ अधिकांश महिला एवं पुरुषहरु गर्भवती रहेको समयमा यौन सम्पर्क राख्न चाहदैनन्..
दैनिक मह खाए हुन्छ यस्ताे फाइदा…
एजेन्सी । मह स्वास्थ्यका लागि एकदमै उपयोगी खाद्यपदार्थ हो । यसमा शक्तिवद्र्धक र रोग निरोधक दुवै गुण हुन्छन् । यसर्थ, महलाई आयुर्वेदमा समेत औषधीय गुणले भरिपूर्ण भनेर व्याख्या गरिएको छ । – दैनिक नियमित एक चम्चा मह सेवन गर्दा रुघाखोकी र घाँटीको समस्याबाट बच्न सकिन्छ । – दुई वर्षभन्दा माथिका बच्चालाई..
मधुमेहलाई टाढा राख्ने ७ साधारण उपाय
काठमाडौ। एउटा यस्तो समय पनि थियो जब मधुमेह–२ को बारेमा कसैलाई थाहा थिएन । तर आजकालको जीवनशैलीका कारण यो रोग निकै नै साधारण भइसकेको छ। प्रत्येक तेस्रो व्यक्ति यो रोगबाट पिडित छन्। तर यदि तपाईं आफूलाई स्वस्थ राख्नुहुन्छ र केही विशेष तरिका अपनाउनुहुन्छ भने यो रोगबाट बच्न सकिन्छ । मधुमेहबाट आफूलाई..
एउटा आलुको प्रयोग गरी छालालाई गोरो र सुन्दर बनाउने तरिका यस्तो छ, जान्नुहोस्
आलुलाई तरकारीको राजा भनिन्छ । यो तरकारीको रूपमा मात्र प्रयोग नभइ उसले सुन्दर छाला बनाउन पनि मदत गर्छ । कसरी बन्छ त आलुबाट सुन्दर छाला यहाँ आज यस भिडियोमा हामी जानकारी दिदैछौँ । सबैभन्दा पहिला आलुलाई पिस्नुहोस् । पेस्टमा मुलतानी माटो मिसाउनुहोस्, त्यसमा एक चिम्टी बेसार मिसाउनुहोस् र थोरै गुलाबजल..